Tilmaamaha: 30 KHILAAFKA XUQUUQDAADA INAAD KU SAMEEYSAA RAAXADA - TELES RELAY
ACCUEIL » VIDEOS SAAMAYNTA: 30 KHILAAFKA XUQUUQDAADA INAAD KU FARAXSATO
Tilmaamaha: 30 KHILAAFKA XUQUUQDAADA INAAD KU SAMEEYSAA SAAXIIBADA
KHILAAFKA ISKUULKA EE SAYNISKA
Waxaan wadaageynaa aruurinta cusub ee tijaabooyin saynis ah oo u muuqda sixir, laakiin taasi maahan. Waxaad abuuri kartaa muuqaal dhan oo sixir adoo isticmaalaya ukun. Dhammaan waayo-aragnimada aan wadaagno uma baahna xirfado gaar ah ama qalab qaali ah. Markan waxaan diyaarinay khibrado ukun wanaagsan. Haa, way qabow yihiin dhammaan qoyskaaguna way la yaabi doonaan!
Waxaan ognahay si fudud oo loo fahmo haddii ukunku yahay mid cayriin ama uusan ahayn. Dul saar ukunta dusha sare oo beddel. Ukunta la kariyey si dhakhso leh ayuu u rogayaa, si ka duwan ukunta cayriin. Khibrada xigta waxay umuuqataa waalan! Waxaad u shiili kartaa ukumo la'aan. Haa waa run! Ukun ku rid foorno ku shub khamriga 96%. Sug daqiiqadaha 30 oo ku raaxeyso sixirka.
Khibrada xigta ee xiisaha lihi waa ukun la isku gudbin karo. Qaado hal galaas oo khal waxaad dhigeysaa sumadda sumadda aaladda gudaha. Si tartiib ah ukun dhig quraarad. Ukun kaga tag dhalada inta lagu gudajiray maalinta 1. Markii ukunku bilaabay inuu noqdo mid translucent, ka soo qaad dhalada. Ukuntaada la diyaarin karo waa diyaar. Hubi haddii uu ku soo boodo. Carruurtu way jeclaan doonaan khibraddan!
Ma ogtahay sida ugu fudud ee loo hubiyo in ukunku cusub yahay? Ukunta dhex dhig biyo. Ukunta jirku waxay ka sare mari doonaan biyaha. Waxaad si fudud u samayn kartaa ukun weyn. Cab oo ka buuxi khal. Dhex dhig ukun ku tag oo ka tag maalin. Ukunku wuu ka weynaan doonaa sidii hore.
La wadaag khibradahaaga asxaabtaada oo isla wada ciyaar!
00: 20 Marka gaarigu buuxiyo ranjiga
01: 34 Tijaabooyin Fresh leh Ukunta
02: 47 fikradda hal abuurka laambada
03h10 Udir bisil ama ma?
07: 31 Bouncy Egg
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=KdabFhe313g
DIIWAANGALINTA MADAXWEYNAHA SIYAASADA EE LEO MESSI | Ku lafoodo doodaha kubada cagta - VIDEO
Kooxaha Verizon waxay kor u qaadaan dadka deggan & # 39; xanaaq - VIDEO
Cristiano Ronaldo Hattrick 🔴 Porrtugal vs Liithuania Résultats de la qualification Eero Cup 2020 – VIDEO
"Waxba isma beddelaan" hadda markuu halkaan joogo - BGR